Kuthiwani uma iqina computer futhi kubambezela? Imbangela futhi isixazululo
Kuqondane ukuthi PC iqala ukusebenzisa eziguquguqukayo. Cishe noma yimuphi umsebenzisi sibhekene izinkathazo ezinjalo. Qonda ukuthi ungenzani uma computer kubambezela futhi zilimaze ngisho abantu tech-savvy njalo. Beginners ngokuvamile ungatholi ukwenza ngaphandle kosizo ochwepheshe. Nokho, ukuxilonga kanye ulungise ezinye izimbangela ukungasebenzi can ngamunye. Isihloko inikeza umhlahlandlela enemininingwane ukukusiza ukuxazulula izinkinga ezivamile.
Ukuze ubone ukuthi iziphi izinyathelo okufanele zithathwe ukuze uthuthukise ukusebenza PC yakho, kufanele uqale uthole imbangela yezinkinga. Kusukela lokho ongakwenza wazihlephula, hang computer?
Inani elincane RAM.
Isikhala esanele ku yesistimu.
Baningi okufakiwe ezingadingekile kumbhalisi.
izinhlelo okungenasidingo ekuqaleni.
Unyaka nonyaka, izidingo isofthiwe kuphela zikhule. I-computer zingase zibuye ziphelelwe isikhathi eminyakeni embalwa. Uma i-PC ifakwe okungenani ezimbili gigabytes inkumbulo, kufanele ufake noma izilimi ukuwuthukulula. Namuhla, ngisho iziphequluli kudinga mayelana 1 GB, futhi eqinisweni ngokuvamile uhlelo egijima izinqubo eziningi futhi eziningi amasevisi OS ukuthi idinga eziningi hardware imithombo.
Ukuze uthole lokho kanye nenani RAM esetshenziswa ohlelweni, kudingeka silungise uchofoze isithonjana "Computer yami" bese ukhetha "Properties" kusukela imenyu yengqikithi. Lapha zonke izici eziyisisekelo ihadiwe uyoboniswa.
Kuthiwani uma i-computer kubambezela bese ilengela Windows XP ngenxa lemali elincane RAM? Kulesi simo, usizo kuphela ukuthuthukiswa. Qaphela ukuthi (DDR 1, 2, 3) kufanele izizukulwane ezahlukene inkumbulo, lapho umbadlana kungasebenza kuphela nomunye wabo. Ukuze ugweme amaphutha, kufanele ukurekhoda imodeli "umama" ngaphambi kokuya esitolo. Ukwazi wakhe, umdayisi banganikeza imishini kwesokudla.
Asikho isikhala esanele idrayivu uhlelo
RAM kwanele kodwa namanje kukhompyutha kubambezela kanye ebeke phansi, ukuthi benzeni kulesi simo? Hlola ukuthi kungakanani isikhala kwi ukwahlukanisa ngohlamvu C. Vula iwindi Explorer bese chofoza ngakwesokudla hard disk isithonjana. Bese ukhethe "Properties."
Kunconywa ukuthi lesi sibalo we "khulula" ikholomu wayengekho ngaphansi kuka-15% umthamo isamba ivolumu, kodwa ngezinye izikhathi ukuze ukhululekile ngokwanele futhi 3-5 GB.
Ukuze aqinisekise isikhala kwi drive C, vula Control Panel. Lokhu kungenziwa ngokukhumula ekwandiseni "Qala" imenyu. It ukhetha "Izinhlelo kanye Izici".
Susa izinhlelo zokusebenza engadingekile nale Umbuso indawo. Uma kungekho izinhlelo engasebenzanga, kubalulekile ukususa ivolumu kakhulu, bese ufake nabo kwi-ivolumu ezahlukene. Ngokuvamile, ukufakwa ngasinye iphakethe yenza umsebenzisi ukuthi akhethe lapho amafayela uzobe angakathululwa konke.
Ukuze uqhubeke ukubhekana nezindaba uma iqina computer futhi kubambezela ngenxa yokuntuleka isikhala kwi drive C, vula "Explorer". Chofoza ngakwesokudla yesistimu, bese uchofoza ku- "Izakhiwo" umugqa. Chofoza inkinobho "Disk lokuhlanza." Okwesikhathi esithile, lo Umbuso indawo kuyokwenza abale lemali ukuthi kungenziwa ikhishwe. Ngemva le nqubo, umsebenzisi kufanele uphawu ebhokisini zonke izinto eziyinhloko isicelo iwindi. Manje uhlala ukuba ucindezele okuthi "KULUNGILE" ukuze uqale inqubo ekususeni yonke amafayela esikhashana.
On yesistimu has isikhala esanele, yini okufanele uyenze uma ikhompyutha kubambezela futhi zilimaze? Kuyinto kakhulu kungenzeka ukuthi engazinzile PC amagciwane okufanele basolwe.
Ukuze kulungiswe le nkinga, kufanele usebenzise igciwane Enani. Professionals batusa besebenzisa Dr. amathuluzi I-Web Cureit futhi Kaspersky Virus Ukususwa Ithuluzi. Bobabili Izinsiza ayatholakala mahhala, ungakwazi ukutshela kusuka kumawebhusayithi ezisemthethweni.
Uma ukhetha ukusebenzisa Cureit, ngemva kokuqala kohlelo, chofoza umugqa "Khetha izinto ukuthi siyothatha isikeni" futhi uphawu zonke maka ibhokisi iyatholakala. Futhi, chofoza eliqoshwe umbhalo othi "Chofoza ukuze ukhethe amafayela" futhi uhlole ibhokisi eceleni "Computer yami." Khona ungaqala ukuskena ngokuchofoza "Qala ukuskena".
Okufanele ukwenze uma ikhompyutha yakho kubambezela nokumisa e imidlalo nezinye izinhlelo zokusebenza "ezisinda" kangaka? Cishe yikho okumele kusolwe ngokushona uhlelo lwaluyophola. Ukuze uqinisekise leli qiniso, kufanele ukusizakala izinhlelo ezikuvumela ukwenza lokushisa zokuqapha yezingxenye esemqoka ye-PC. Ithuluzi kangcono izifundo ezinjalo kubhekwa aida 64.
Okufanele ukwenze uma ikhompyutha yakho kubambezela bese ilengela Windows XP, kanjani ukuhlola ukuthi izingxenye PC ukuze overheat? Okusetshenziswayo Ukufakwa aida 64 futhi uyisebenzise. Thola line phezulu isithonjana nge umfanekiso ishadi. Ngemva ngokuchofoza kuyo kuzovula iwindi ngokuthi "Ukuhlolwa kokucindezeleka". Libonisa lokushisa amagrafu labo amadivayisi uhlelo eziye esakhelwe izinzwa. Ukusuka kwesobunxele kuya beka uphawu lokuhlola eduze zonke izinto ngaphandle kwe "Ukucindezeleka Disk Local" bese uchofoza inkinobho Qala. Qaphela indlela aba kulombhalo ushintsho ngaphansi komthwalo. Lapho value ezibucayi, isivivinyo kufanele igcwaliswe ngokuchofoza umugqa "Misa".
For Amadivayisi ezahlukene lokushisa evamile kuyahlukahluka. Ukuze uthole ukuthi yini njengento eyamukelekayo amadivayisi efakwe ohlelweni, kubalulekile ukuba uvakashele iwebhusayithi kwabakhiqizi.
Aida 64 kuvumela ukuhlola izinga izingxenye eziningi, kodwa musa hlola uhlelo isiqophi uyisebenzisa. Ikhompyutha kubambezela kanye ebeke phansi, yini okufanele uyenze uma usola okweqile ihluzo ikhadi? Ithuluzi engcono ngokuhlola isiqophi amakhadi kubhekwa FurMark.
Ngemuva kokuqala uhlelo esikrinini, iwindi izilungiselelo lizovela. Kufanele abeke isheke ebhokisini kwaphawula "Isikrini esigcwele" bese ukhetha sokulungiswa okukhulu osekelwa qapha. Ngemva kokwenza lezi zinyathelo, chofoza "Ukuhlolwa kokucindezeleka".
On isithombe ngakuthathu liyavela esibukweni, kodwa akufanele kubhekwe njengento engeyona. Ukunakwa esikhulu kumele kukhokhelwe uhlelo, okuyinto izoboniswa ezansi. Ibonisa kahle kakhulu indlela nezinga lokushisa elizosetshenziswa kule ihluzo adaptha. Uma sifinyelela sikhathi esibucayi, cindezela "Esc", ukuqedela ukuhlolwa.
Ngenxa okweqile amabhuleki ikhompyutha yiqhwa, benzeni ukuze buyisela futhi ukusebenza uzinzile? Okokuqala, kufanele ukuhlanza zonke ukupholisa uhlelo kurediyetha nge ibhulashi kanye cleaner wezindlu.
Vala PC bese ukhipha ikhava ohlangothini. Qaphela, akudingekile ukuba asondele umlomo wombhobho ukuze amapulangwe at ibanga esingaphansi 7-10 cm. Yingakho kufanele usebenzise ibhulashi. Angakwazi ukuxubha kude uthuli Caked ukuthi akunakwenzeka ukususa vacuum cleaner.
Ngemva wokuhlanza wonke isofthiwe udinga ukuphinda ukuhlolwa. Uma lokushisa is hhayi benganhlanhlathi, kufanele ucabangele esikhundleni nokunamathisela ezishisayo noma Coolers.
Kuthiwani uma i-computer kubambezela nokumisa esiqalisweni sezinhlelo? Ukuxazulula lenkinga kufanele azame ukususa kakhulu isicelo uqalisa. Ukuze wenze lokhu, kabusha PC. Ngaphambi kokuqala OS thwebula, chofoza inkinobho F8 ukufinyelela imenyu. Kuyo, khetha "imodi ephephile."
Ngemva isibonisi esikrinini ideskithophu, ubambe inhlanganisela ikhibhodi "Win R". Iwindo lizovula "Gijima." Umugqa okokufaka bhala "msconfig" bese uchofoza inkinobho "OK". Chofoza "Ukuqalisa" ithebhu bese ususa isheke uphawu kuzo zonke lezo zinhlelo zokusebenza ukuthi akudingeki njalo. Uma ungaqiniseki, shiya amabhokisi phambi kuphela labo izinhlelo babe in the "Umkhiqizi", "Microsoft" elingaziwa.
Ngemva kokubulawa, chofoza inkinobho "OK" ukuze ulondoloze izinguquko.
Kuthiwani uma iqina computer futhi kubambezela ngesikhathi kuvulwa izicelo kanye namafayela? Mhlawumbe kufanele ugijime inqubo defragmentation. Iqiniso lokuthi disk hard uhlukaniswe imikhakha. Kulokhu, omunye ifayela eqoshiwe kungathatha imikhakha ayizinkulungwane ezimbalwa kwi drive kanzima. Hhayi ngaso sonke isikhathi yonke umbhalo oseceleni eseduze nomunye. Ngakho-ke, incipha futhi sivinini sekufundza.
Ukuze ahlele isingathwe ulwazi HDD, kufanele defragment njalo. Ukuze uqalise esakhelwe-Windows Umbuso, vula "Explorer". Chofoza ngakwesokudla noma yisiphi isigaba bese ukhetha "Properties." Iya "Amathuluzi" ithebhu, bese uchofoza "Defragment".
Ku-window esivula, khetha drive bese uchofoze igama elithi "Defragment." Kungcono ukuba bafeze lo inqubo wonke amavolumu ngokulandelana.
inkinga Hardware RAM
Ngaphandle kwesizathu, nekhompyutha isibe kancane phansi hang out, kuthiwani uma noyedwa lamasu angenhla kungasizi? ukusebenza Ngokuvamile engazinzile we PC ne elonakele kwimemori yohlelo. Hlola RAM we wayibhinca angasebenzisa esakhelwe OS amathuluzi. Vula Control Panel. isithonjana Its itholakala "Qala" imenyu, ngakwesokudla. Chofoza ilebula "Isimiso Sokuqondisa". Ku-window olandelayo ukhethe "ithuluzi ukuhlola imemori" futhi uyisebenzise njenganoma iyiphi enye uhlelo.
Umsebenzisi uzocelwa ukuthi ukwenza ukuhlolwa emva amandla elilandelayo noma qala kabusha ikhompyutha yakho manje. umehluko kakhulu kubo akuyona. Inketho yokuqala lizovikela wonke amadokhumenti, uma kunesidingo.
Ngemuva ukuqalisa PC uzoqala inqubo yokuhlola. ukusebenza kwawo ziyahlukahluka ku izinhlelo ezahlukene. Uma, ngesikhathi ukuhlolwa imiyalezo evela esibukweni abomvu, kusho ukuthi inkumbulo ukwehluleka iphutha.
Kuthiwani uma iqina computer futhi siyehla ngenxa "bat" RAM?
Endaweni yokuqala ukuxazulula inkinga kufanele ukusula oxhumana nabo kusuka uthuli oxide. Susa ikhava iKhabhinethi. Donsela RAM wayibhinca, ukusunduza iziyisikhombisa okuyinto ubambe idivayisi usiphule it out. Thatha swab ukotini, akugcobhoze ngotshwala noma Cologne futhi Sula oxhumana nabo. Ngemuva omiswe, beka RAM endaweni waphinda futhi enze ukuhlolwa yayo.
Kuthiwani uma iqina computer futhi kubambezela futhi emva inqubo? Ngokuvamile ezitholakala iyunithi uhlelo, emapheshana eziningana RAM. Qalisa ithuluzi ukuhlolwa ngamunye wabo eceleni. Ngakho sizoveza ukuthi iyiphi idivayisi zingenze PC yakho. imishini Spoiled kumelwe ithathelwe, noma umane ayifakiwe.
Impendulo yombuzo "Okufanele ukwenze uma iqina computer futhi kubambezela?" kudalulwe ngokuphelele. Mangisho ukuthi into yokuqala udinga ukuba afeze izinyathelo ezihlose iqhakambisa isofthiwe ingxenye bese udlulela kulokho ukuhlola ihadiwe. Ngaphezu kwalokho, ukusebenza akuvamile engazinzile PC yakho ixhunyiwe kuphela into eyodwa. Ngokuvamile, kwaqubuka izinkinga ezimbi uqale kuphela uma kokubili zenzeka ngalesi skhathi ngenxa yezizathu eziningana. Ngakho-ke kuyadingeka ukuba asondele udaba icubungulisise ukulungisa ikhompyutha yakho.
Kuyini Vector ihluzo umhleli
Indlela ukusula umlando kwemilayezo Skype kanye ICQ, kanye nomlando ukuphequlula esipheqululini ethandwa?
Isiqophi abahleli kwi "Android": ukubuyekeza izinhlelo eziningana
Uhlelo umculo ukucutshungulwa: uhlu engcono. abahleli Sound
Indlela ukusetha isilondolozi kwi "Android" - imiyalelo Wabasaqalayo
Uwoyela Engine for diesel nge turbocharger. Yikuphi namafutha diesel ne turbocharging kangcono?
Indlela ukushaja ibhethri yefoni yakho ukwandisa umsebenzi
Eloni Musk ufuna computerize ubuchopho bethu ... kuyinto kanjani lokhu?
Kabusha loan. Izindlela aphume nezimo ezinzima
Zingaki izitini pan - kubalulekile ukwazi ukuthutha wezimpahla
Indlela ukuhlobisa amaqebelengwane imvubelo inhlama. amathiphu alula
Indlela ukuhlobisa olungaphambili lwesonto indlu ngokushesha, ephumelelayo futhi kahle?
Abadlali of the ifilimu "Boomer". Itulo isifinyezo movie
"Nano Gel" I-psoriasis: ukubuyekezwa, yokusetshenziswa, ukwakheka, imiphumela